सबै मिस इन्डिया किन उस्तै ? (हेरौँ १० वर्षका मिस इण्डियाका तस्बिर) « हाम्रो ईकोनोमी
सबै मिस इन्डिया किन उस्तै ? (हेरौँ १० वर्षका मिस इण्डियाका तस्बिर)
मिस इन्डिया जीवन परिवर्तन गरिदिने प्रतिस्पर्धा हो ।
तर अन्तिम चरणमा पुग्न सफल भएकोमा उत्साहित हुनुको साटो प्रतियोगीहरूले आफूलाई एउटा बहसको केन्द्रमा पाएका छन् ।
लोकप्रिय चलचित्र कलाकारहरूले त्यस्ता सामग्रीको प्रवर्धन पनि जारी राखेका छन्।